Japan kurerutsa zvipingamupinyi zvekupinda kune vafambi vanochengetwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Japan Kuputsa Nhau » Japan kurerutsa zvipingamupinyi zvekupinda kune vafambi vanochengetwa
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Japan Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Chete zvitupa zvekubayiwa nenjodzi naPfizer neBioNTech, Moderna neAstraZeneca ndizvo zvinogamuchirwa kubva kune vekunze vanosvika.
Japan kuti igamuchire zvitupa zvekudzivirira zvekuUS, EU neJapan kubva kuvashanyi.
Hurumende yeJapan inofungawo kurerutsa zvirango zvepamba COVID-19.
Dzimwe nyanzvi dzekurapa dzinonyevera nezve njodzi yekumisa mitemo isati yakwana.
Vakuru vehurumende yeJapan vakazivisa kuti vari kuda kuzorodza zvido zvekuchengetedzwa kweve COVID-19 kune avo vanopinda munyika vaine chitupa chinosimbisa nhomba izere yekurwisa coronavirus kutanga kwaKurume wegore rino.
Sekureva kwemishumo yekutanga, iyo yekuisa yega nguva mushure mekuyambuka muganho weJapan ichapfupikiswa kubva pamavhiki maviri kusvika kumazuva gumi.
Chete zvitupa zvekubaiwa ne Pfizer uye BioNTech, Moderna uye AstraZeneca ichagamuchirwa kubva kune vekunze vanosvika.
Zvitupa zvekudzivirira zvinofanirwa kupihwawo muUSA, nyika dzeEU kana Japan, kuti igamuchirwe.
Pakutanga, iyo Ministry yeJapan yehutano yakamisa kushandiswa kweinosvika 1.63 mamirioni e Moderna jekiseni kubva pamabatch matatu akagadzirwa kuSpain. Chinhu chisingazivikanwe chakawanikwa mukugadzirira.
Hurumende iri kutarisirwawo kusarudza kuwedzeredza mamiriro ezvinhu epakarepo eCOVID-19 kupfuura zuva rekupera kweSvondo kusvika Nyamavhuvhu 30 kuenda kuTokyo nemamwe matunhu gumi nemasere, sezvo zvipatara zvichiramba zvichimanikidzika, vanodaro mapato ari kutonga.
Parizvino, vanhu vakumbirwa kuti varege kufamba vachidarika miganho yepurovhinzi, asi nzendo dzakadai dzinogoneka kana vanhu vapedza chirongwa chavo chekudzivirira kana vanogona kuratidza humbowo hweyedzo yakaipa yeCOVID-19, masosi ane ruzivo rwechirongwa akadaro.
Hurumende iri kuronga zvakare kurerutsa parizvino zviuru zvishanu-zvevatariri pazviitiko zvikuru kana mamiriro akafanana akasangana.
Nzvimbo dzekudyira dzinoomerera kune chaiyo anti-hutachiona matanho anotenderwa kunwisa doro, nepo mapoka akakura kupfuura mana anogona kudya pamwechete.
Dzimwe nyanzvi dzezvekurapa dzakaratidza kushushikana kuti yakurumidza kubvumidza vanhu kuti vadzokere kuhupenyu hwavo chaihwo sezvo Japan isati iine kupararira kwehutachiona.
"Tinotarisisa mamiriro ezvinhu ehurongwa hwezvokurapa uye toita sarudzo" pamamiriro ekukurumidzira, Prime Minister Yoshihide Suga akadaro.